Soo dejisan AOL Desktop 9.8.2 – Vessoft
WindowsInternetkaInternetka kaleAOL Desktop
Bogga rasmiga ah: AOL Desktop
AOL Desktop – software ah la badan oo adeegyada dhisay-in. software ka kooban toolbar ah fududahay in goobaha internetka kala duwan iyo adeegyada iyada oo loo marayo browser dhisay-in ay helaan ah. AOL Desktop kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan email ah, isgaadhsiin ee shabakadaha bulshada, caleenta wararka, dhegayso raadiyaha online mar, iwm software wuxuu taageeraa ka shaqeynayaan buuxda ee ka kooban browser la download tababaraha dhafan, shaqo la tabs iyo web ammaan fankooda. AOL Desktop leeyahay tiro ka mid ah qalab si astaysto software ah in ay la door user shakhsiga ah iyo shuruudaha.
adeegyada badan oo la dhisay-in
The browser web soomi
Tiro balaadhan oo ah goobaha
Ciyaaryahankii warbaahinta dhisay-in
Soo dejisan AOL Desktop
Faallo ku saabsan AOL Desktop
AOL Desktop Xirfadaha la xiriira
Clownfish loogu talo galay Skype – waa barnaamij lagu tarjumo farriimaha soo gala iyo kuwa socda ee Skype. Softiweerku wuxuu taageeraa adeegyada caanka ah ee tarjumaadda oo leh luqado aad u tiro badan.
Tool in uu kaydiyo xogta ee kaydinta daruur. Software ayaa awood u geliyaan in faylasha ay u kaydinta daruur iyo bixiyaan helitaanka ah in xogta soo bixi qalabka kala duwan.
IZArc – softiweer lagu caburiyo laguna xaalufiyo aaladaha noocyada kala duwan ah. Software-ka wuxuu taageeraa beddelka u dhexeeya qaababka archive wuxuuna u suurtageliyaa dib u soo celinta gunaanadkii burburay.
TuneFab Apple Music Converter – oo ah badalka iTunes multimedia ee taageera qaabab kala duwan isla markaana kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo muusig iyo dhammaan liiska wax lagu qoro, oo ay ku jiraan buugaagta maqalka ah ee iTunes iyo maqal la’aan DRM.